အနုပညာ – Page 182 – We Love Cele
လိင်တူချစ်သူလေးနဲ့ ချစ်သူဘဝတည်ဆောက်ထားကြောင်း ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလိုက်တဲ့ အလှမယ် အိမ့်မျက်ခြယ်
Miss Earth Myanmar 2015 ဖြစ်တဲ့ အလှမယ် အိမ့်မျက်ခြယ်ကတော့ လိင်တူချစ်သူလေးနဲ့ ဒီသောကြာနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့လေးက Relationship ချိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ရုပ်ရည်ချောမောလှပသလို စိတ်ထားလေးလည်း ဖြူစင်လွန်းလှတဲ့ အလှမယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘအပေါ်ကို ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ သမီးလေးဖြစ်တဲ့အပြင် တချိန်က ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ ဘဝတစ်ခုကိုလည်း ပရိသတ်တွေကို အသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ မိခင်ကတော့ လမ်းဘေးမှာ...
မိခင်တစ်ဦးအနေနဲ့ သားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေကို မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး
ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ကြီး လွင်မိုးရဲ့ သမီးကြီး ယွန်းဝတီလွင်မိုးလေးကတော့ ချစ်ရသူနဲ့အတူ လက်ထပ်ပြီး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတာပါ။ လတ်တလောမှာတော့ ယွန်းဝတီလွင်မိုးက သူမရဲ့တစ်ဦးတည်းသော သားလေး Liam နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပရိသတ်တွေကို တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချို့သောသူတွေက သူမတို့သားအမိရဲ့ပုံလေးတွေတင်ရင် Sad react ပေးကြတာမို့ Sad react ပေးရင် သူမမကြိုက်ကြောင်းနဲ့ သားလေးပါတဲ့ ပုံတွေမှာ...
ခရစ္စမတ်မှာ မိခင်ဖြစ်သူဆီက KIA ကားတစ်စီး လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ ယွန်းယွန်း
ကလေးသရုပ်ဆောင် ဘဝကတည်းက ပရိသတ်တွေကို ခံစားချက်ရသတွေ မျိုးစုံပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ချစ်စရာကောင်မလေး ယွန်းယွန်းကတော့ လက်ရှိမှာ အရောင်အသွေးစုံလင်တဲ့ အပျိုမလေး ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ အရွယ်​​ရောက်​လာ​လေ ပိုပိုလှလာ​လေ ဖြစ်​တဲ့ ယွန်းယွန်း​လေးက​တော့ အခုဆိုရင်​ မင်းသမီးတစ်​ဦးအ​နေနဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​​နေရပြီပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ လတ်တလောမှာတော့ ယွန်းယွန်းလေးက ခရစ္စမတ်မှာ မိခင်ဖြစ်သူဆီက KIA ကားတစ်စီး လက်ဆောင်ရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ကြည်ကြည်နူးနူးတင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်နော်။ အရမ်းကိုလိမ္မာတဲ့...
နေခြည်ဦးက ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်းများတာကြောင့် ပရိသတ်တချို့ရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ကြုံတွေ့ဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်. အဲ့ဒီနောက် သူအရမ်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ မင်းသား ဒေါင်း အပေါ် လက်ရှိခံစားချက်ကိုလည်း အခုလို ပြောပြထားပါတယ်. နေခြည်ဦးဟာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နေတတ်သူ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်. သူမ အနေနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေတတ်သူဖြစ်သလို ယောက်ျားလေး အပေါင်း အသင်းလည်း များတဲ့ သူပါ. ဒီလို ယောက်ျားလေး...
ခရစ္စမတ်နေ့လေးမှာ အနုပညာရှင်များကို လက်ဆောင်တွေပေးခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး
မိတ်ကပ် Blogger အဖြစ် ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားလာခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦးဟာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာပြတ်သားသူမို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ရရှိထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Beauty Blogger အနေနဲ့ ရေပန်းစားခဲ့ရာမှ သူမရဲ့ ပါရမီထူးချွန်မှုနဲ့ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို တိတိကျကျ သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ကြော်ငြာအမြောက်အများကိုလဲ လက်ခံရိုက်ကူးနေရပါပြီ။ နေခြည်ဦးဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းမှာ "ရန်သူ"၊"ဧည့်သည်"၊"အောက်ဖဲမလှန်ကြေးနော်" ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး...
ခရစ္စမတ်နေ့လေးမှာ ချစ်ရသူနဲ့ ရွှေလက်တွဲသွားပြီဖြစ်တဲ့ အလှမယ် အမရာငြိမ်း
Miss International Myanmar 2015 ရဲ့ အလှမယ် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အမရာငြိမ်းကတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့က ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ရွှေလက်တွဲသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ Miss Universe Myanmar 2018 ပြိုင်ပွဲကြီးကိုတကျော့ပြန် ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး ဖိုင်နယ်ပွဲကြီးကို တော့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ကိုယ်စားပြုအလှမယ်အဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ သရဖူလည်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း...
ခရစ္စမတ်​မှာ ရည်းစား​ဟောင်းအတွက်​ ဆု​တောင်း​ပေးလိုက်​တဲ့ ယုန်​​လေး
အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးလွန်းတာကြောင့် အဆိုပိုင်းနဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာသာမက ဒါရိုက်တာပိုင်းမှာပါ အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီး ရှေ့ဆက်နေတဲ့ ယုန်လေးကတော့ အောင်မြင်မှုနေရာတစ်ခုရထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ အချစ်​​ရေးနဲ့ပတ်​သတ်​ရင်​​တော့ အမြဲငြိမ်​သက်​​နေတတ်​တဲ့ ယုန်​​လေးက​ ဒီ​နေ့ ခရစ္စမတ်​​နေ့​လေးမှာ ချစ်​ခဲ့ဖူးတဲ့ ရည်းစား​ဟောင်းအတွက်​ ဆု​တောင်း​ပေးခဲ့တာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ အရမ်းချစ်​ခဲ့ကြ​ပေမယ့်​လည်း အတူဆက်​ရှိ​နေဖို့ မဖြစ်​နိုင်​​တော့တာ​ကြောင့်​ အ​ဝေးက​နေပဲ လွမ်း​နေမယ်​ဆိုတဲ့ ယုန်​​လေးရဲ့စကားက ရင်​ထဲကို ထိ​စေပါတယ်​​နော်​။ ယုန်​​လေးက​တော့ "အရင်တုန်းကဆို...
ခရစ်​စမတ်​ကို ကြိုဆိုလိုက်​တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်​မိုးတို့သားအမိရဲ့ ချစ်​စရာဗီဒီယို​လေး
ပရိသတ်တွေက ခေးလေးယွန်းဆိုပြီး အချစ်ပိုနေကြရသူ​လေး ဖြစ်​တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်​မိုးက​တော့ လက်​ရှိမှာ​ အရမ်းချစ်​ရတဲ့ ခင်​ပွန်းရယ်​၊ အရုပ်​​လေးလို ချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့ သားသား​လေး Liam (လွင်​ထက်​) ​လေးရယ်​နဲ့အတူ ​ပျော်​စရာ​ကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝ​လေးကို ဖန်​တီးပိုင်​ဆိုင်​ထားတာပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ မျက်​နှာချိုလွန်းလှယွန်းဝတီလွင်​မိုး​လေးရဲ့ သား​လေး Liam ကလည်း အဖိုး၊ အဖွား၊ အ​ဖေ၊ အ​မေ​တွေသာမက ပရိသတ်​​တွေကပါ အချစ်​ပို​နေကြရတာပါ။ ဒီ​နေ့​လေးမှာ​တော့ ​ခေး​လေးယွန်းက...
နားထောင်ရင်း မျက်ရည်ကျလောက်စေတဲ့ အေသင်ချိုဆွေရဲ့ သမီးလေးအတွက် ရည်ရွယ်တဲ့သီချင်း
နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် မလေး အေသင်ချိုဆွေဟာဆိုင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ သူမက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးနဲ့အတူ အနုပညာအလုပ်တွေကြိုးစားလုပ်ရင်း အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိုမိုလေးရဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အေသင်ချိုဆွေ ကသမီးလေး Ivy အတွက် သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေး ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အဆိုတော် အိမ့်ချစ်က အေသင်ချိုဆွေရဲ့ အကြောင်းကို ရေးစပ်ထားတာဖြစ်ပြီး သမီးလေး...
ချစ်​သူ​​​ပေးတဲ့ ​မွေး​နေ့ကိတ်​​လေးကို လက်​ခံပြီး ငြိမ်းချမ်း​ရေးယူလိုက်​တဲ့ ထွန်းထွန်း
အဆိုပိုင်းမှာ​ရော သရုပ်​​ဆောင်​ပိုင်းမှာပါ ထူးချွန်​တဲ့ ထွန်းထွန်းက​တော့ သူချစ်​ရတဲ့ အနုပညာအလုပ်​​တွေကို တစ်​စိုက်​မတ်​မတ်​လုပ်​ရင်း ချစ်​ရသူ​တွေနဲ့ ဘဝကို ​ပျော်​​ပျော်​ရွှင်​ရွှင်​ ဖြတ်​သန်း​နေတာပါ။ အရမ်းချစ်​ရတဲ့ ချစ်​သူကိုလည်း ပိုင်​ဆိုင်​ထားတဲ့ ထွန်းထွန်းက​တော့ မ​နေ့ကပဲ ချစ်​သူနဲ့ ပြတ်​စဲသွားပြီလို့ ပရိသတ်​​တွေကို အသိ​ပေးခဲ့တာ​ကြောင့်​ အားလုံးက အံ့အားသင့်​ခဲ့ရတာပါ။ ထွန်းထွန်းရဲ့ ချစ်​သူ​ကောင်​မ​လေးက​တော့ အထင်​လွဲမှု​တွေ​ကြောင့်​ ပိုကြီးသွားရတဲ့ သူတို့နှစ်​​ယောက်​ရဲ့ ပြဿနာ​ကြောင့်​ မ​နေ့ကပဲ ထွန်းထွန်းကို...
Page 182 of 299 Prev 1 … 181 182 183 … 299 Next